?Wuxuu ahaa miinada meesha fog laga hago qarixii aan ka badbaaday, waxay doonayeen inay I dilaan ma aqaan sababta? guddoomiye ku xigeenka G. Sool. – Radio Daljir
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Sool Maxamed Aadan Cadde ayaa sheegay in qarixii uu maanta ka badbaaday uu ahaa mid la doonayey in isaga lagu qaarajiyo,uuna ahaa miinada meesha fog laga hago aysanna jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo inuu bur-buray gaarigii ay la socdeen.
Isagoo caawa la hadlayey Barnaamijka Caawa iyo daljir ee baxa idaacadda Daljir ayuu sheegay guddoomiyuhu in marka qaruxu dhacayey ay gaariga saarnaayeen isaga iyo labo qof oo kale, uuna ka yimid xafiiskiisa una socday guriisa.
Waxaa uu intaasi ku daran inaysan ilaa hadda aqoon cidda ka dambaysan qaraxaasi iyo sababta loo dililahaa midna, balse waxaa uu sheegay in arrintani ka mid tahay qaraxyada ka dhaca deegaanada kale ee Somalida.
Guddoomiye ku xigeenka ayaa tibaaxay inaysan ilaa iyo hadda jirin cid qaraxaasi loo qabtay balse ay ku hawllan yihiin ciidamada ammaanku, ?taasina ma?aha mid shaqayayda wax u dhimaysa? ayuu yiri Maxamed Aadan Cadde.
Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Laascaano ayaa daba socday qaraxyo muddaba ka dhacayey magaaladaasi kuwaasi oo lagu dilay mas?uuliyiin ka tirsan Somaaliland ayna ku dhaawacmeen qaar kale.